कभर स्टोरी Archives - Himal Sanchar
[ad_1] २२ Sawan, काठमाडौं । ‘पत्रकार, वकिल, डाक्टर, पूर्वप्रशासक मन्त्री बन्न हुने, व्यापारी किन नहुने ?’ नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले ११ Sawan २०७८ मा सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा प्रश्न गरे । व्यावसायिक पृष्ठभूमिका कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले पनि Sawan १२ गतेको प्रतिनिधिसभामा यही विषय उठाए, ‘संविधानले व्यवसायीहरूलाई सांसद बन्न त दिएकै छ,… Continue reading ‘स्वार्थी पात्र’हरूको दबदबा : सरकारदेखि संसदसम्म
Free movement of crocodiles in Rapti River (Photo feature)
[ad_1] Among the various species of reptiles found in Nepal, the crocodile is the most endangered species. Its numbers are decreasing rapidly not only in Nepal but also in the world. The number of crocodile crocodiles in Nepal has been under extreme threat in the last few years. The Gharial breeding center was established in… Continue reading Free movement of crocodiles in Rapti River (Photo feature)
Categorized as National, कभर स्टोरी, घडियाल, फोटोग्राफी, मेन स्टोरी
विश्वका पाँच फेसन डिजाइनर, जसले आफ्नोपनका कारण ख्याति कमाए
[ad_1] भनिन्छ, रेड कार्पेटमा देखिने हरेक सेलिब्रेटीको पछि एउटा राम्रो फेसन डिजाइनरको हात हुन्छ । तर ती फेसन डिजाइनरको बारेमा धेरैलाई जानकारी हुँदैन । फेसन डिजाइन वा सौन्दर्यशास्त्र कपडा र मानिसको बीचमा कसरी व्यवस्थापन गरेर मान्छेलाई सुन्दर बनाउन सकिन्छ भन्ने एक कला हो । यस्तो शैली संस्कृति र सामाजिक दृष्टिकोणबाट प्रभावित हुन सक्छ र समयसँगै… Continue reading विश्वका पाँच फेसन डिजाइनर, जसले आफ्नोपनका कारण ख्याति कमाए
Categorized as Lifestyle, कभर स्टोरी, फेसन डिजाइनर
[ad_1] बिहान सूर्य उदाउँछ । साँझ अस्ताउँछ । रात हुन्छ, फेरी दिन । महिना बद्लिन्छ । ऋतु फेरिन्छ । समयको एउटा चक्र पुरा हुन्छ । यही चक्रसँगै अन्न अंकुराउँछ, पालुवा पलाउँछ, फूल फुल्छ, फल लाग्छ, पाक्छ । कहिले जाडो याम सुरु हुन्छ, कहिले वर्षा । माटो, हावापानी अनुसार बोट–बिरुवा उम्रन्छ । फैलिन्छ । अन्नबाली, फलहरु… Continue reading प्रकृतिसँग जीवनको लय मिलाउनुहोस्
Categorized as Lifestyle, कभर स्टोरी, स्वस्थ्य शरीर
मिथिला व्यञ्जन : झण्डै एक हजार वर्षसम्म अपरिवर्तित परिकार !
[ad_1] मैथिली व्यञ्जनको नेपाल र भारतमा लामो इतिहास पाउन सक्छौं । ११ औं शताब्दीमा लेखिएको मैथिली पुस्तक ‘वर्णरत्नाकर र प्राकृति पिंगल’ नामक पुस्तकमा लेखक ज्योतिश्रर ठाकुरले मैथिली खानाको चर्चा गरेका छन् । सो पुस्तकमा मैथिली भोजन, दही र माछाको चर्चा छ । यसलाई आधार मान्दा झण्डै एक हजार वर्षसम्म पनि मैथिली भोजनमा कुनै परिवर्तन नभएको… Continue reading मिथिला व्यञ्जन : झण्डै एक हजार वर्षसम्म अपरिवर्तित परिकार !
Categorized as Lifestyle, कभर स्टोरी, मिथिला भोजन
फिटनेसको अनेक काइदा : कुन देशमा कस्तो अभ्यास विधि अपनाउँछन् ?
[ad_1] दुनियाँभरका मान्छे शारीरिक अभ्यासका लागि अलग अलग विधिहरू अपनाउने गर्छन् । कसैले नियमित साइक्लिङलाई नै आफ्नो शारीरिक अभ्यासको साधन बनाउने गर्छन् भने कसैले नियमित दौडिएर अभ्यास गर्ने गर्छन् । मान्छेहरू व्यायाम पनि घरभित्र गर्ने कि बाहिर भन्नेमा मुलुक र भूगोलको आधारमा रोजाइ फरक फरक हुने गर्छ । शारीरिक व्यायाम सबैतिरका मान्छेले गर्छन् । तर… Continue reading फिटनेसको अनेक काइदा : कुन देशमा कस्तो अभ्यास विधि अपनाउँछन् ?
Categorized as Lifestyle, अभ्यास विधि, कभर स्टोरी
[ad_1] ‘संग्रहालय किन जाने ?’ धेरै युवापुस्ताहरूले सोध्ने एउटा साझा प्रश्न हो यो । एउटै भवनभित्र लाखौं वर्ष पुराना संस्कृतिलाई संग्रहित गर्ने संग्रहालय आम जनताको लागि खुला गरिएको ८२ वर्ष पूरा भएको छ । तर पनि यसमा धेरैको आकर्षण हुन नसक्नु पछिको कारण के होला ? यो प्रश्नमा यस क्षेत्रका विषय विज्ञहरूको एउटै जवाफ हुन्छ,… Continue reading छाउनी स‌ंग्रहालय : जहाँ भेटिन्छ लाखौं वर्ष पुरानो मानव जीवनशैली
Categorized as Lifestyle, कभर स्टोरी, राष्ट्रिय संग्रहालय
गर्मीमा साइकल यात्रा गर्दा के-के कुरामा ध्यान दिने ?
[ad_1] गर्मी मौसम सुरु भएको छ । गर्मी सुरु भएसँगै नियमित साइकलमा यात्रा गर्नेहरूको लागि भने पसिना आउने वा स्वास्थ्यमा चासो दिन सकिएन भने समस्या हुन सक्छ । हिजोआज नियमित कार्यालय जान समेत साइकल प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरू काठमाडौंमा बढेका छन् । देवेन्द्र बस्न्यात तातो मौसममा साइक्लिङ गर्नु डिहाइड्रेसन लगायतको चुनौतीहरू थपिन सक्छ । साइकल यात्रीको… Continue reading गर्मीमा साइकल यात्रा गर्दा के-के कुरामा ध्यान दिने ?
Categorized as Lifestyle, कभर स्टोरी, साइकल यात्रा
कौसीबारीमा तरकारी लगाउने बेला भयो, बिउ रोप्ने कि बिरूवा ?
[ad_1] काठमाडौं । करेसाबारीमा तरकारी लगाउने सिजन सुरु भएको छ । फागुन महिनाको अन्तिम वा चैतको पहिलो हप्तादेखि सहरी भेगमा घरको कौसीमै पनि अर्गानिक तरकारी लगाउन चाहनेहरूलाई अब तयारी सुरु गर्न कौसी खेतीसम्बन्धी जानकारहरू सुझाव दिन्छन् । कौसीमा खेती गर्न चाहनेहरूले अबको एक/डेढ हप्तापछि करेसाबारीमा बिउ राखेर वा सिधै बिरुवा नै लगाएर पनि तरकारी फलाउन… Continue reading कौसीबारीमा तरकारी लगाउने बेला भयो, बिउ रोप्ने कि बिरूवा ?
Categorized as Lifestyle, कभर स्टोरी, कौसीखेती